Jorge Luis Borges: kubudirira mutsamba, kudemba murudo | Zvazvino Zvinyorwa
John Ortiz | | Bvunzo, Type, Literature, Nhetembo, Nyaya
Jorge Luis Borges, kubudirira mutsamba, kuzvidemba murudo.
MuArgentina maive naJorge Luis Borges kuyerera kusingadzoreki kwetsamba, sosi yehungwaru yekuti rufu chete ndirwo rwaigona kuvhara kuitira kuti pasave nemadonhwe aizobuda. Zvisinei, kunyangwe tichitambura izvo zvakamirira mumwe nemumwe anopfuura nepo munzvimbo dzakaperera dzatinodaidza hupenyu, mvura dzakayerera dzichibva kune iri hofori dzinoramba dzichipa fungidziro nemweya wevakawanda.
Munyori wenyaya? Anopesana nemanovels?, Zvakare; Muzivi?, Hongu; Nyanduri?, Sevashoma. Jorge Luis Borges vakauya kumashoko kuitira kuti vasazombofanana. Nekudaro, chii chatinoziva chaizvo nezve hupenyu hwerudo hwenyanzvi iyi? Mabasa ake anotiudzei nezvazvo? Vanotaura nezvehupenyu hwake vanoti chii? Kune zvinonakidza zviitiko zvinoonekera, uye izvo zvichaunzwa kumusoro nhasi.
1 Jorge Luis Borges: kubudirira mutsamba
2 Jorge Luis Borges: kuzvidemba murudo
2.2 Estela Canto naamai vaBorges
2.3 Borges naElsa Helena Astete Millán
2.4 Maria Kodama, kuchema kwapera here?
Jorge Luis Borges: kubudirira mutsamba
Ndiani asina kuverenga kana kunzwa nezvazvo Aleph o Fikisheni? Kashoma kuwana muverengi wenguva dzose uyo asina. Aya anoshanda, kungova iota yezvatinogona kudaidza "kuyerera kweBorgean" muenzaniso wakasarudzika wekugona kwake mutauro mumatanho akasiyana. Kuverenga Borges kunobata chiito, kupenya, kunyengera.
Nyanzvi dzemitauro dzakaburitsa nenyaya shomanene hunhu hwemunyori weArgentina Kwete zvisina maturo mvura yekucherechedza yayaive nayo: mubairo weJerusarema muna 1971, Mubayiro Unokosha waEdgar muna 1976, Miguel de Cervantes Prize muna 1980, uye rega kuverenga. Hongu, kubudirira kwaJorge Luis Borges mumazwi aive pachena.
Jorge Luis Borges: kuzvidemba murudo
Zvino, chii chinotaurwa pamusoro peBorges murudo? Basa rake rinoti chii? Vanotaura nezvehupenyu hwako vanoti chii. Chokwadi ndechekuti basa rake renhetembo rinoratidza zvishoma nezvehukama hwepedyo. Nyanduri anoreva mudetembo rake chipingamupinyi chinomuparadzanisa nechishuwo icho, kubva parudo irworwo chairwo, kubva kune rwenyama, rwemurume nemukadzi. Muchokwadi, iyo yekuita bonde mumabhuku ake ingangoita nil. Uye kwete, hazvireve kuti anga asingade uye nekunzwa, asi kwete nesimba raaida, kwete nekutakura kwaakapa.
Mutsara naJorge Luis Borges.
Zvakaringana kuverenga nhetembo yechipiri ya1964 kuti uone zvishoma zveichi chokwadi:
Handichazofadzi. Pamwe hazvina basa.
Kune zvimwe zvakawanda zvinhu pasi pano;
chero nguva yakadzika
uye rakasiyana kupfuura gungwa. Hupenyu hupfupi
Uye kunyangwe hazvo maawa akareba kudaro, rimwe chete
rima chishamiso rinotidzingira,
rufu, rimwe gungwa, mumwe museve
zvinotisunungura kubva kuzuva nemwedzi
uye rudo. Mufaro wawakandipa
uye iwe wakatora kubva kwandiri unofanira kudzimwa;
Chaive chinhu chese chinofanirwa kunge chisiri chinhu.
Chete kuti ndine mufaro wekusuruvara,
iyo tsika isina maturo inondinakidza
kumaodzanyemba, kune mumwe musuwo, kukona yakati ».
Estela Canto naamai vaBorges
Chimiro chaamai vake chakapihwawo muchiitiko ichi, chazvino, chinomanikidza, kudzora rusununguko uye zvisarudzo zvemunyori. Nyaya inonakidza yakaitika nemuturikiri Estela Canto, mukadzi aripo Aleph. Hongu, Borges akadonha achipenga murudo naye muna 1944. Chigadzirwa cherudo ichocho chakazvarwa iyo ingave iri nyaya inozivikanwa kwazvo yemunyori.
Borges akamukunda nezvose, aine yake yepamusoro gadget: tsamba. Zvisinei, hazvina kutora nguva refu amai vaBorges vakatanga kupindira muhukama, vachiva vakaparadzaniswa kubva kuEstela. Muturikiri akapomerwa mhosva yekusa dzivirirwa nekuti aisangoenderana nemagariro epanguva yacho. Chokwadi chaive chekuti Leonor, amai nyanduri, vakabudirira kuita kwavo uye vakapedza hukama.
Kubva ipapo vakatevera nhevedzano yekusawirirana pakati pevaviri, zvisinei, makore akazotevera aive maBorges avo vaisada chero chinhu naEstela.
Borges naElsa Helena Astete Millán
Elsa Helena Astete Millán aive musikana waBorges achiri mudiki. Mushure mechinguva vakaparadzana, akaroora, uye Borges akadzinga kudzoka kune irwo rudo. Nekudaro, aive akafirwa nemakumi emakore, akazo funga kumupfimba. Ndiwo waive mubatanidzwa wenhetembo wekutanga, Borges aive nemakore makumi matanhatu nemasere uye aive nemakore makumi mashanu nemashanu (muna 68).
Iyi yakanga isiri yekuroora kwekurota, zvakangoita makore mana. Uye kunyangwe zvichitaridzika kunge zvisinganzwisisike mumurume wezera raBorges, mumvuri waamai vake, uyo aive achiri mupenyu, wakaramba wakamira.
Maria Kodama, kuchema kwapera here?
Mushure mekufa kwamai vaBorges (Leonor aive nemakore makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe) mukadzi wechidiki akaonekwa muhupenyu hwanyanduri, uyo panguva ino akauya kuzogara. Musikana uyu ainzi Maria Kodama. Vakasangana panguva yekushanya kwaBorges kuUnited States uye kubvira ipapo vakave vasingaparadzanisike.
Mushure mematambudziko anoonekwa aBorges, uye makore asina kupfuura pasina, akawedzera kudiwa kwaari, uye nekuda kwekuyemura uye rudo rwakanzwa naKodama, akatora chinzvimbo chake nekuzvipira. Ivo vaviri, vane mukaha wakakura musiyano wezera (anopfuura makumi mashanu), vakaroora makore gumi nerimwe mushure mekusangana. Borges akashaya angangoita mwedzi miviri gare gare ndokusiya zvinhu zvake zvese naKodama.
Mukuguma uku kusingatarisirwi, kuzvidemba kwaBorges kwakadzoserwa, uye basa rake raive rakadzivirirwa zvakanaka mumawoko emuridzi senge mumwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Jorge Luis Borges: kubudirira mutsamba, kuzvidemba murudo
Nzira yekunyora inoverengeka: kurapwa kwenguva
Francis Drake. Mabhuku matanhatu nezve inozivikanwa yeChirungu corsair